घरमा भएको चामल सकियो, कोठाभाडा कहाँबाट तिर्नु ? – Khabarhouse
घरमा भएको चामल सकियो, कोठाभाडा कहाँबाट तिर्नु ?
Khabar house | २७ बैशाख २०७७, शनिबार १६:४२ | Comments
मोरङ – ओखलढुङ्गाकी कल्पना मगर मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको नेमुवामा रहेको कार्टुन उद्योगमा काम गर्नुहुन्छ। एक वर्षदेखि नियमित रुपमा काम गर्दै आउनुभएकी मगर विगत डेढ महिनादेखि कामबाट वञ्चित हुनुभएको छ। लक डाउनको कारण देखाउँदै उद्योगले सबै मजदुरलाई घर पठाएको छ । घर हुनेले आफ्नो घरमा बसेका छन् ।
मगर भने बालबच्चा लिएर भाडाको घरमा बस्दै आउनुभएको छ । उद्योगले काममा नआउन भनेपछि घरमा भएको खाद्यान्न सकिएको र घरभाडा तिर्न समेत सकस भएको मगरले बताउनुभयो। अवस्था राम्रो हुँदासम्म उद्योगले काममा राखेको तर लकडाउन सुरु भए पछि काममा नआउन र आवश्यक परेमा बोलाउने भन्दै निकालेपछि समस्या भएको मगरको भनाइ छ ।
‘एक जनाले ५ जनाको परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यताले उद्योगमा काम गर्दै आएको थिएँ,’ मगरले भन्नु भयो, ‘अहिले रोगको महामारी देखाउँदै उद्योगले नआउन भन्यो । यता राहत पनि दिएन । के हामी कोठा भाडामा बसेका नागरिक होइनौँ ?’ चार वर्षदेखि सोही कार्टुन उद्योगमा काम गर्दै आउनुभएकी अर्घाखाँचीकी मेनुका मगरको समस्या पनि उस्तै छ । भाडाको कोठामा बस्दै आउनु भएकी मेनुकालाई कोठा भाडा तिर्न समस्या हुन थालेको छ । बीचमा काम सुरु भएको जानकारी पाएर काम गर्न गएपछि उद्योगले छिर्न नदिएर फर्काएपछि अहिले घरमै बस्नुपरेको मेनुकाले दुखेसो पोख्नुभयो ।
‘घरमा बसेको लामो समय भइसक्यो । हरेक दिन कमाएर घर चलाएका हामीलाई छाक टार्न धौ धौ हुन थालेको छ,’ मेनुकाले भन्नुभयो । खोटाङ घर भएकी सुुनिता थापालाई पनि अरु साथीको जस्तै समस्या भएको छ । टङ्कीसिन बारीमा रहेको म्याजिक चामल उद्योगमा काम गर्ने थापालाई उद्योगले नआउन भन्यो । घरमा बस्दा राहत लिन आउनेबारे पनि कसैले नसोधेको उहाँले बताउनुभयो । उजालो अनलाइनमा सुमन तिमल्सिनाले लेख्नु भएको छ ।